“Yaa Sabaa koottu kana dhaga’i!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Yaa Sabaa koottu kana dhaga’i!!
“Yaa Sabaa koottu kana dhaga’i
Jaal Abdii Raggaasaa irratti shira ajjeechaa godhamaa ture (jiru) quba qabduu? Erga hooggantoota ABO olaanoo kaan waliin rasaasa mana jireenyaa isaanii irratti banuun fuudhanii hidhanii booda kanneen kaan gadhiisanii isa qofa mana hidhaatti hambisan.
Jaal Abdiin gandummaa fi shira balfuu isaatiin mana hidhaatti darbame. Dhiyoo kana mana hidhaa keessaa baasuun bakka Jiillee jedhamu geessuun ajjeesuuf qophiitti akka turan odeeffannoon qaba.
Akkaataan itti qindeeffame akka armaan gadii kanatti. Qotee bulaa naannoo Jiillee tokko qarshiin mijeessan. Qotee bulaa kanaaf ragaan mana yaalaa illee qophaa’ee jira. Ragaan kun akka qotee bulaan kun sammuun darbe kan agarsiisu dha.
Haaluma kanaan Jaal Abdii fuudhanii bakka kana geessuun sakatta’iinsaaf yeroo bu’amutti namichi maraataa dha jedhamee qopheeffame kun fiigee dhufee “isa kanatu obboleesa koo ajjeese” jedhee rasaasaan rukutee akka ajjeesu dha.
Wanti kun kan irratti hojjetamee qopheeffamee dha. Dheengadda Jaal Abdii bakka itti hidhamee fuudhanii mana murtii Sulultaatti dhiyeessuu ni yaadattu. Kan inni jalqaba ture Burraayyuu amma maaliif Sulultaa geessan seetu?
Ajjeechaan akkanaa kan qopheeffame hoggantoota kaanitilleeti. Isa kaan ittan deebi’a. Ammaaf garuu haala kamiinuu yoo rakkoon tokko Jaal Abdii irra kan gahu ta’e qindeessa mootummaan ta’uu namuu haa hubatu.
Fayyaa ta’aa ! ‘
Qeellam Wallaggaa Naannoo Shabeel jedhamurraa ummanni dhibbatamaan baqatee naannoo Gaambellaa seenee jira.